नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभामा चोट, राष्ट्रियसभामा भोट ! – Sagarmatha Online News Portal
नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभामा चोट, राष्ट्रियसभामा भोट !
काठमाडौं। २०७४ सालमा प्रतिनिनिधिसभा जान नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई वर्षपछि राष्ट्रियसभाको यात्रा तय गरेका छन् । गोरखा २ मा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएपछि श्रेष्ठको सांसद बन्ने प्रयास असफल भएको थियो ।
बिहीबार भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उनी गण्डकी प्रदेशबाट विजयी भएका छन् । गोलाप्रथामार्फत २ वर्ष कार्यकाल पाएका राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको अवधि सकिन लागेपछि निर्वाचन भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा अन्यबाट नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे र महिला सदस्य विन्दादेवी रानाको कार्यकाल सकिँदै थियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले अन्यतर्फ उम्मेदवनर बनायो । गण्डकी प्रदेशमा नेकपाको एकल बहुमत थियो । प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा पनि नेकपाकै बहुमत भएकाले श्रेष्ठको जित सुनिश्चित थियो ।
बिहीबारको निर्वाचन औपचारिकता पुरा र्गयो । १ हजार २ सय १८ मतभारले विजयी भएका छन् । श्रेष्ठ ३ हजार ४ सय ६२ मतभारसहित विजयी हुँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सूर्यप्रसाद रेग्मीले २ हजार २ सय ४४ मत ल्याए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार शंकरप्रसाद बरालले १९८ मतभार पाए ।
८५ वटा स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशमा २ जना अनुपस्थित रहे । ल्हो घेकर गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्ट र सिरानचोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष रिता देवकोटा देशबाहिर रहेका कारण मतदानमा सहभागी भएनन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैले मत हाले । गण्डकी प्रदेश सभामा ४० जना नेकपा सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तह प्रमुख उपप्रमुखको १८ मतभार हुन्छ ।